Erectile လုပ်ဆောင်ချက်၏ Neurophysiology: Androgenic Effects (2003) - Porn On Your Brain
Erectile ရာထူးအမည်များ၏ Neurophysiology: အန်ဒရိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2003)
Erectile ရာထူးအမည်များ၏ Neurophysiology: အန်ဒရိုဂျင်အကျိုးသက်ရောက်မှု
Arthur အယ်လ် Burnett
Andrology, Vol ၏ဂျာနယ်။ 24, အမှတ် 90060, 2003
Andrology ၏မူပိုင်ခွင့်© American Society
Urology များ၏ဦးစီးဌာန, အဆိုပါဂျိမ်း Buchanan Brady ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအင်စတီကျုက The ဂျွန်ဟော့ကင်းဆေးရုံမှ, Baltimore, Maryland ကမှ။
penile စိုက်ထူစည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုမြင့်မားအထူးပြုသွေးကြောဇီဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီစည်းမျဉ်းမှပံ့ပိုးသည့်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအနက်အာရုံကြောစနစ်ကဒီထိန်းချုပ် affording မူလတန်းစည်းမျဉ်းယန္တရားဖြစ်ရိပ်မိသည်။ လိင်တံအတွင်းရပ်စဲအာရုံကြောဖို့ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးကနေ neuroaxis ၏အကွိမျမြားစှာအဆင့်ဆင့်သည်, erectile တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ကြောင်း neurochemical Impulses သတင်းပို့အစပြုနှင့်ထပ်ဆင့်လွှင်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကအန်ဒရိုဂျင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပါဝင်ပတ်သက်ဆင်တူတဲ့အာရုံခံဆားကစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကွိုးစားအားထုကြောင်းလူသိများသည်။ ဤရွေ့ကားအခန်းကဏ္ဍအလယ်ပိုင်းနှင့်အရံအာရုံကြောစနစ်အဆင့်ဆင့်မှာနှစ်ဦးစလုံးကြိုးပမ်းခဲ့တယ်နေကြသည်။ အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှု၏လေ့လာမှုအဓိကကျောရိုးရှိသတ္တဝါကဦးနှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူဗဟိုယန္တရားများလေ့လာခဲ့သည်။ အန်ဒရိုဂျင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဆယ်လူလာယန္တရားများ neurogenesis, ဆဲလ်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်း, ဆဲလ်ရွှေ့ပြောင်း, synapses ဖွဲ့စည်းခြင်း, synapses ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ဆဲလ်အသေခံပါဝင်သည်။ အပိုဆောင်းအလေးပေးရံအာရုံခံလမ်းကြောင်းအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုမှမကြာသေးမီကပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအစဤအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းကြားတွင် electrophysiologic အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်ထားပါတယ်ပေမယ့်အရံအာရုံခံအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေအဓိကအား, အပျိုဖော်ဝင်စမှာသင်းပြီးနောက်အရှိဆုံးအထူးသဖြစ်ပေါ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအပြောင်းအလဲများကိုပိုင်ထိုက်သိရသည်။
ဤသည်တင်ပြချက်ဟာ neuroanatomy အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှပေးထားသောအထူးထည့်သွင်းစဉ်းစား, အာရုံကြောလမ်းကြောင်းများနှင့် erectile တုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောယန္တရားများနှင့်အတူအလယ်ပိုင်းနှင့်အရံအဆင့်ဆင့်မှာ penile စိုက်ထူ၏အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှုအကျဉ်းခေတ်ပြိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်, ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်စိုက်ထူများအတွက်အဓိကထိန်းချုပ်သည့်စနစ်အပေါ်တစ်ဦးဟာသစည်းမျဉ်းအခြေခံကွိုးစားအားထု androgens မှရသောအတိုင်းအတာအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကနေရေးဆွဲ Insights testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်သုံးပြီးဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ပါဝင်သော pharmacotherapeutic ကြားဝင်အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆက်ဆံဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိထုတ်ဖေါ်လိမ့်မည်။ ဒီဘာသာရပ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာအခြေစိုက်စခန်းအများစုဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်အလေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာ, လူ့ penile စိုက်ထူအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေမျှမျှတတကန့်သတ်ဖြစ်နေဆဲကြောင်း။ အသိအမှတ်ပြု ထို့အပြင်အန်ဒရိုဂျင်ဆိုးကျိုးများအတွက်အမှန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားမှုထိုကဲ့သို့သော metabolites အန်ဒရိုဂျင်မျောက်ဝံများ (ကှတျချ et al, 1998) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism သြဇာလွှမ်းမိုးပါဘူး aromatized သောဂုဏ်ထူးအဖြစ်, အသုံးအများဆုံးဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်မျောက်ဝံများအကြားတည်ရှိနေမှလူသိများကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဤနေရာတွင်တင်ပြသတင်းအချက်အလက်များ neurophysiologically ကမကထပြုခဲ့ penile စိုက်ထူ၏အန်ဒရိုဂျင်ထိန်းချုပ်မှုရှုထောင့်စဉ်းစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ လူ့ erectile function ကိုနှင့် ပတ်သက်. ကန့်သတ်အခြအကောင်းဆုံးဤအချိန်တွင်ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။
အများအပြားက ဦး နှောက်အရေးပါ penile စိုက်ထူ၏ supraspinal ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါဝင်ရန်အဆိုပြုထား (Burnett, 2000) ။ ညှိနှိုင်းရေးစင်တာများ (neuroaxis ၏အမိန့်အရဆင်း) တွင် cortical နှင့် subcortical ဒေသများ၊ medial hypothalamic (ရိယာ (paraventricular nucleus, medial preoptic area [MPOA] နှင့် dorsal hypothalamic area) နှင့် dorsal hypothalamic area တို့ပါ ၀ င်သည်။ ) ဇယားကိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါကျောရိုးအဆင့်မှာအရေးကြီးသောအရေးပါထဲမှာတင်ပါးဆုံတွင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော input ကိုအုပ်ချုပ်သော interololateral ဆဲလ်ကော်လံ (lumbosacral အဆင့်မှာ sacral parasympathetic နျူကလိယအဖြစ်ရည်ညွှန်း), ကျောရိုးတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အာရုံခံ input ကို circuit ကိုအဖြစ် medial dorsal ဦး ချိုနှင့် dorsal commissural နျူကလိယ; ventral horn တွင် lumbosacral အဆင့်၌တည်ရှိပြီး Onuf ၏နျူကလိယ (bulbocavernosus ၏ကျောရိုးနျူကလိယဟုလည်းလူသိများ) သည်။ ၎င်းသည် penile နှင့်ဆက်စပ်သော striated ကြွက်သားများကိုထုံထိုင်းစေသည်။ ဦး နှောက်တွင် diencephalon ၏နျူကလိယကျောရိုးအာရုံကြောအဆင့်များနှင့်တုန့်ပြန်မှုဖြစ်နိုင်သော penile စိုက်ထူမှုများနှင့်အခြား ဦး နှောက်ဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတက်နှင့်အဆင်းတွင်ပေါင်းစပ်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။ အဆိုပါကျောရိုး penile afferents နှင့် reflex erectile တုံ့ပြန်မှုများအတွက်လိုအပ်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် somatic efferents အကြားအာရုံကြော reflex ကွင်း mediates ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုဖျန်ဖြေပေးသည့်ဗဟိုအာရုံကြောဓာတုဗေဒတွင်မတူကွဲပြားသောအရာများပါဝင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များတွင်အမျိုးမျိုးသော shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှတစ်ဆင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ monoamines (dopamine, norepinephrine နှင့် 5-hydroxytrypatmine)၊ decarboxylated အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ neuropeptides (oxytocin, prolactin, adrenocorticotropin, opioids) နှင့်ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောမော်လီကျူးများအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောအခန်းကဏ္ roles များရှိသည်။
penile စိုက်ထူ၏ neuroregulation Peripheral ပု, parasympathetic စာနာနှင့် somatosensory အာရုံကြောလမ်းကြောင်း (ဘားနက်, 2000) ၏ညှိနှိုင်းလိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားလမ်းကြောင်း efferent နှင့် afferent ပရိုဂျက်ကိုဖော်ပြရန်။ penile စိုက်ထူဖို့သက်ဆိုင်ရာအဆိုပါ efferent စီမံကိန်းသည်စာနာ thoracolumbar (T10-L2) နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ sacral parasympathetic (S2-S4) သင်းဖွဲ့လျက်, sacral somatic (S2-S4) အာရုံကြောစနစ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ input ကိုအဓိကအားဖြင့်ယုတ်ညံ့ hypogastric plexus မှပေါ်ပေါက်ခြင်း, လိုဏ်ဂူအာရုံကြောကကိုယ်စားပြုသည်နှင့် somatic input ကိုပု sacral plexus ထံမှပေးသောသင်တန်း pudendal အာရုံကြောကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ penile စိုက်ထူဖို့သက်ဆိုင်ရာအဆိုပါ afferent projection sacral innervation (S2-S4) ကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်လိင်တံ၏ dorsal အာရုံကြောသည် pudendal အာရုံကြော၏အာရုံခံအကိုင်းအခက်များကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။
ပေါင်းစပ်ခုနှစ်တွင်ဤအာရုံကြောလမ်းကြောင်းလိင်တံ၏အသှေးကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သည်နှင့် engorgement ၏ sequence ကိုထိန်းညှိ, သူတို့သည်လည်း penile ကျောမှုတိုးပွားဖို့ရာစာချုပ်, အ penile-ဆက်စပ် striated ကြွက်သားများလှုပ်ရှားမှု coordinate ။ လိင်တံအတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏ effector က်ဘ်ဆိုက်များသွေးကြောချောမွေ့ကြွက်သားအစိတ်အပိုင်းများ, လိင်တံထောက်ပံ့သည့် vasculature နှင့်လိင်တံ (ဘားနက်, 2000) ၏ erectile တစ်ရှူးပါဝင်သောအဆိုပါ trabeculae ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအစိတ်အပိုင်းများကိုလိင်တံ၏စိုက်ထူပြည်နယ်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းသွေးကြောချောမွေ့ကြွက်သားသေံတစ်ဒီဂရီထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်လျော်သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ကြသည်။ penile tumescence နှင့်စိုက်ထူအတွင်း penile vasculature vasodilates နှင့် trabecular တစ်ရှူးစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်လာသည်။ flaccid ၏လုပ်သူများပြည်နယ်အတွင်း penile vasculature vasoconstricted ဖြစ်ပါတယ်နှင့် trabecular တစ်ရှူးကန်ထရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအ neurotransmitters penile စိုက်ထူ၏ neuroregulation သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများကြသည်ပေမယ့်လက်ရှိသဘောတရားများကိုတစ်ဦး neurotransmitter အဖြစ်နှင့်တစ်ဦး endothelial effector (ဘားနက်, 2002) အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် penile စိုက်ထူ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးဖျန်ဖြေအဖြစ်, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏မြင်သာထင်သာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှု messenger ကိုမော်လီကျူးကိုထောကျပံ့ ။ proerectile neurotransmitter ယန္တရားများနှင့် antierectile neurotransmitter ယန္တရားများ၏တားစီး၏ပံ့ပိုးအတူတူလုပျသငျ penile စိုက်ထူထုတ်လုပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။
Steroid တစ်မျိုး-အထိခိုက်မခံအာရုံခံခြင်းနှင့်အာရုံခံစည်းမျဉ်းလမ်းကြောင်းများ၏ concept ကိုကောင်းစွာဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏အဓိကဧရိယာအထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးအပြုအမူတွေကိုအုပ်ချုပ်ကြောင်းဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အတူဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှုဆက်စပ်ပေးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism, မှုနှငျ့ဆ။ အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်ရငျ့စဉ်နှင့်လူကြီးတစ်လျှောက်လုံးမတူကွဲပြားသောအာရုံခံဂုဏ်သတ္တိများထိန်းညှိကြောင်း Steroid တစ်မျိုး receptors ဖော်ပြဒေသများမှတဆင့်ဆိုးကျိုးများကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ ဤရွေ့ကားဒေသများတစ်ခုတည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာသို့မဟုတ်အာရုံခံစင်တာမှအာရုံစူးစိုက်မှုမရှိဘဲဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်တလျှောက်လုံးကိုယ်စားပြုနေကြသည်။
ဖြစ်ကောင်းနို့တိုက်သတ္တဝါများမှာအကောင်းဆုံးစရိုက်လက္ခဏာတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphic neuromuscular စနစ် bulbocavernosus ကြွက်သား (SNB) ၏ကျောရိုးနျူကလိယပါဝငျသညျ။ ဤသည်နျူကလိယ striated ischiocavernosus, bulbocavernosus နှင့်လိင်တံမှပူးတွဲ levator ani ကြွက်သား innervate ကြောင့်အောက်ပိုင်း lumbar ကျောရိုးထဲမှာ motoneurons ၏အုပ်စုတစုဖော်ပြသည်။ အဆိုပါကြွက်ကဒီမျိုးစိတ်အတွက် lumbar အစိတ်အပိုင်းများ5နှင့်6အတွက် ventral ဦးချို၏ dorsomedial သောအဘို့ကိုတည်ရှိသောဒီနျူကလိယ, စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်မူလတန်းတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးပြုကြနှင့်, ဤ motoneurons အမျိုးသမီး (Breedlove နဲ့အာနိုး, 3) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ယောက်ျားအတွက်နှစ်ကြိမ်အရွယ်အစားများမှာအဖြစ်အထီးကြွက်အဖြစ်ကိုအနည်းဆုံး 1980 ကြိမ်အများအပြား SNB motoneurons ဝင်စား။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးမမွေးခင် bulbocavernosus ကြွက်သားပေါ်မှာ synapses SNB ဆဲလ်ဝင်စားသော်လည်း, ကြွက်သားနဲ့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ motoneurons ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးကြွက် (Breedlove နဲ့အာနိုး, 1983) တွင်မွေးဖွားပြီးနောက်မကြာမီပျက်ယွင်း။ ဤသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် SNB motoneurons အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ကွဲပြားမှုနှင့်ပစ်မှတ်ကြွက်သားအမျှင်တည်စေ။ ကွဲပြား morphological အပြောင်းအလဲများအတွက်ရရှိလာတဲ့ဗီဇယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ဟော်မုန်းထိတွေ့မှုနှင့်ဆုတ်ခွာ perinatally နှငျ့ပတျသကျသောသက်သေအထောက်အထားအမျိုးမျိုးလိုင်းများ (ကှတျချ et al, 1998 တွေ့မြင်, အပိုဆောင်းပြန်လည်သုံးသပ်) ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်အားဖြည့်ပါပြီ။
ထိုသို့သောစမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားအခိုင်အမာအန်ဒရိုဂျင်ဟာ SNB နှင့်ဆက်စပ် penile တုံ့ပြန်မှုများ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေကိုထိခိုက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းများအတွက်ယန္တရားကဘာလဲ? ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့ဆက်စပ် innervation (Breedlove နဲ့အာနိုး, 1983) ၏ညှာမှုအန်ဒရိုဂျင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာထိန်းသိမ်းထား SNB motoneurons ပစ်မှတ်ကြွက်သားနှမြောသောအယူအဆမျက်နှာသာ။ Neurotrophic အချက်များကြွက်သားနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်စပ် motoneurons (; al-Shamma နှင့်အာနိုး, 1995 မှောင်ခိုဂိုဏ်း et al, 1997) ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အန်ဒရိုဂျင်နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သို့မဟုတ် sensitized ခံရဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ တစ်ခုကအန်ဒရိုဂျင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းလူကြီး (; Nanasaki နှင့် Sakuma, 1995 Rand နှင့် Breedlove, 2000) တွင်တစ်ဦးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍကွိုးစားအားထုယုံကြည်နေသည်။ လူကြီးအတွက် trophic သက်ရောက်မှုများအတွက်အခြေခံ penile-ဆက်စပ် striated ကြွက်သားအန်ဒရိုဂျင်ထောက်ခံမှုဖို့မသာပြောပြတယ်။ ဒီရငျ့အဆငျ့မှာ SNB motoneurons လည်းသူတို့ somata အရွယ်အစား (Freeman က et al, 1996) ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အန်ဒရိုဂျင်ထိတွေ့တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ထိုကဲ့သို့သောအန်ဒရိုဂျင် receptors ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တီထွင်ခဲ့ကြသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးလေ့လာခဲ့လိင် dimorphic အာရုံကြောစင်တာလူသားမြားသညျအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောမျိုးစိတ်မှရေးဆွဲသတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွ, MPOA ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနျူကလိယအတွင်းမှာပဲအာရုံခံတဲ့လိင် dimorphic အုပ်စုသည်အမျိုးမျိုးသောမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြနှင့်ကြွက်များတွင်သူတို့အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားအတွက်အရွယ်အစား5ကြိမ် သာ. ကြီး (Gorski et al, 1980) သလောက်ရှိပါတယ်။ ဤအအာရုံခံ၏ cytoarchitecture Synaptic လယ်ကွင်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှု (Raisman နှင့်ဖျော်ဖြေမှု, 1973) မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူလည်းကြွက်များတွင်လိင်အကြားမတူကွဲပြားဖြစ်ပါတယ်။ receptor-စည်းနှောင်လေ့လာမှုများ (အမျိုးသမီးကြွက်များထက်အထီးကြွက်များထက်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်နျူကလီးယား estrogen receptor-binding က်ဘ်ဆိုက်များ၏ကြီးမြတ်သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အထီးကြွက်များတွင်အန်ဒရိုဂျင် receptor-binding က်ဘ်ဆိုက်များ၏ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာနှင့်အတူဤတိကျတဲ့အာရုံခံမှ Jacobson Steroid တစ်မျိုးက်ဘ်ဆိုက်များဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုခဲ့ကြ et al, 1987) ။ သို့သော်နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်ဤသူ၌လိင် dimorphic အာရုံကြောစင်တာများ၏ function ကိုပင်ကြွက်အဆင့်မှာ equivocal ဒေတာနှင့်အတူမရေမရာဖြစ်နေဆဲ: အဧရိယာ lesioning ပြီးနောက်, တက်လာတယ်, တွင်ဤအပြုအမူရလဒ်များကိုတစ် ပတျသကျ. အလှနျသေးနုသော်လည်းကြွက်များတွင်အထီး copulatory အပြုအမူတွေကိုမစသောအပြောင်းအလဲရှိပါတယ် ( ကှတျချ et al, 1998) ။
MPOA လိင် dimorphic အာရုံခံ၏အန်ဒရိုဂျင်စည်းမျဉ်းကြွက်၏လေ့လာမှုများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့အစည်း (ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ) နှင့်မွှေးကြိုင်ယူဆချက်မှလိုက်နာစောင့်ထိန်း။ သန္ဓေသားနှင့်အစောပိုင်း postnatal အသက်တာ၌ neurogenesis နှင့်အာရုံခံတိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်ဟာသသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (Gorski et al, 1980) ဆိုလို။ လူကြီးအတွက် gonadal Steroid တစ်မျိုးထိတွေ့မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကဒီနျူကလိယ (Gorski et al, 1980) ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်မထိခိုက်ပါဘူး။ သို့သော်အသက်ကြွက်များတွင်ရေရှည် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးမှာအနည်းဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်အန်ဒရိုဂျင်ထိတွေ့ခြင်းဟာ morphological အဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြီးလူကြီးအတွက်ဆိုးကျိုးများကွိုးစားအားထုစေခြင်းငှါခဲ့ရသည်, ထို MPOA (Sato et al, 1998) တွင် mounting အပြုအမူအဖြစ် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုထိန်းသိမ်းပြသထားသည် ။ စိတ်ဝင်စားစရာအီစထိုဂျင်ကုသမှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာအန်ဒရိုဂျင်၏မွှေးကြိုင် metabolites လုံလုံလောက်လောက်သည်ဤအာရုံခံ (Dohler et al, 1984) masculinize ကြောင်းညွှန်ပြ, ကြွက်များတွင်အန်ဒရိုဂျင်ကုသမှုမထက်တွင် neuron ၏ဤကို select လုပ်ပါလူဦးရေရဲ့ပုံမှန်ရငျ့ elicits ။
သည်အခြားလိင် dimorphic အလယ်ပိုင်းအရေးပါကိုလည်းအများအားဖြင့် morphological ခိုင်ခိုင်လုံလုံတလျှောက်နှင့်အဓိကအားဖြင့်ကြွက်မျိုးစိတ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပါပြီ။ ဤ olfactory limbic စနစ် (medial amygdala, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, preoptic ဧရိယာ), hippocampus နှင့်ဆင်တူ hypothalamic အရေးပါပါဝင်သည်။
အန်ဒရိုဂျင်၏အသင်းအဖွဲ့နှင့်အရံကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံခံ၏ function ကိုသာမကြာသေးမီကလေ့လာမှုအောက်တွင်လာကြပြီ။ အန်ဒရိုဂျင် receptor များနှင့်အန်ဒရိုဂျင် sensitivity ကို lumbosacral preganglionic အာရုံခံ, စာနာခြင်းနှင့် parasympathetic postganglionic အာရုံခံနှင့်အာရုံခံ postganglionic အာရုံခံ (Schirar et al, 1997b) အတွက်သရုပ်ပြပါပြီ။ အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်စာနာခြင်းနှင့် parasympathetic အာရုံခံတဲ့အရောအနှောပါဝင်သည်သောတင်ပါးဆုံတွင်း ganglion ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ganglion ဆဲလ်ခံရပြီ။ ကြွက်များတွင်စာနာအာရုံခံသင်းသို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းအုပ်ချုပ်ရေး (Keast နှင့် Saunders, 1998) ပြီးနောက်အများဆုံးသိသိသာသာအရွယ်အစားကိုပြောင်း။ ဒီလေ့လာရေးနှင့်အတူအပြိုင်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းထိတွေ့တိုက်ရိုက်ကြွက် (Kanjhan et al, 2003) ၏တင်ပါးဆုံတွင်း ganglia အတွက်စာနာအာရုံခံ၏အမြှေးပါး capacitance နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ သက်သေအထောက်အထားအန်ဒရိုဂျင်အဓိကအားအာရုံခံဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်အရွယ်အစားကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြုသော်လည်း, နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားအိုင်းလိုင်းများနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်း ganglion အာရုံခံနှင့်ဆက်စပ်ဒုတိယ messenger ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သူတို့အကျိုးသက်ရောက်ရန်ထောက်ပြသည်။ ဥပမာ, ကြွက်များတွင်သင်းပြီးနောက် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးဒီ neurochemical အဆင့် (Schirar et al, 1997a) ပြုပြင်သော်လည်း, အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကိုထုတ်ပေးထားတဲ့နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ၏လျော့ကျ neurochemical အကြောင်းအရာအတွက်သင်းရလဒ်များကို။ အလားတူသက်ရောက်မှုများကြွက်လိင်တံ (; Baba et al, 1993 Giuliano et al, 2000) တွင် postganglionic လိုဏ်ဂူနှင့် dorsal အာရုံကြောရပ်ဆိုင်းသရုပ်ပြပါပြီ။
စမ်းသပ်ဆဲအထောက်အထားအကွိမျမြားစှာလိုင်းများတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အာရုံကြောစနစ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအတွက် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍတည်ထောင်ရန်။ လွဲလျှင်အခြားသော morphological သက်သေအထောက်အထားအနေဖြင့်အဘယ်အတိုင်းအတာအထိလိင် dimorphic အာရုံကြောစင်တာများလူသားတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုကြဘူးသလော ဤအမှု၌တစ်ဦးနှင့်ပြဿနာကြောင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ gonadal steroids အစောပိုင်း, သန္ဓေသား Steroid တစ်မျိုးအရေးယူမှုမှမသက်ဆိုင်တဲ့တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism များအတွက်အကောင့်ဟုတ်မဟုတ်အရွယ်ရောက်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာခွဲခြားရန်ခက်ခဲကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင် dimorphic ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုကိုတဖန်သန္ဓေသား Steroid တစ်မျိုးအရေးယူစပ်လျဉ်းမပါဘဲ, ဖွံ့ဖြိုးရေးကာလအတွင်းသို့မဟုတ်လူကြီးအတွက်ဖြစ်စေ, လူ့အတှေ့အကွုံပျေါအခွခေံကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphisms မွေးဖွားမှာသိသာလျှင်ကန့်သတ်ဥပမာဒီအကြောင်းကိုထောကျပံ့ဖို့တည်ရှိပေမယ့်ထိုကဲ့သို့အခက်အခဲများ၏ resolution, အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ လူ့ဦးနှောက်၏အလေးချိန်ယောက်ျားအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ကြောင်းအဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှု, ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော steroids ၏တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်ထက်အခြားကြီးထွားဟော်မုန်းကဲ့သို့သောအခြားအချက်များများလွှတ်ပေးရေးနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ပဋိသန္ဓေ ယူ. လူသားများအတွက်လိင် dimorphic ကွဲပြားမှုများစွာကိုအမှန်ပင် postnatally အချို့သိသိသာသာအချိန်တွင်အန်ဒရိုဂျင်ထိတွေ့မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ လူသားများတွင်သက်သေအထောက်အထားသန္ဓေသားဟော်မုန်းထိတွေ့လိင် dimorphic အပြုအမူတွေကိုဆုံးဖြတ်သည်ရှိမရှိအဖြစ်ကြေညာချက်ဆပ်ဖို့လုံးဝအပြီးအပြတ်ကောက်သည်။ လူမှာမွှေးကြိုင်ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့မသက်သေအထောက်အထားများနှင့်တစ်ဦးဣတ္အပြင်ပန်းနေသော်လည်းပုလ်အပြုအမူတွေကိုမပြပါဘူးသူအန်ဒရိုဂျင်-အာရုံမခံစားနိုင်သော XY တစ်ဦးချင်းဆက်ဆက်ဒီအယူအဆဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်မယ်လို့၏သာဓကရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် steroids ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစောပိုင်းသရုပ်ဆောင်ကြောင်းပြတ်သားအထောက်အထားတိုက်ရိုက်လူ့ဦးနှောက်ချို့တဲ့ဖြစ်နေဆဲ masculinize ။
ထို့ကြောင့်ဤဘာသာရပ်အပေါ်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများ၏အခြေခံပေါ်မှာ, လူ့စိုက်ထူ၏ neuroregulation ကျော်အန်ဒရိုဂျင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်စဲရပါမည်။ ကအန်ဒရိုဂျင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးပြုဆေးပညာသိသာသောကွောငျ့အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဘယ်လိုအဘယ်မှာ Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူကလူ့ဦးနှောက်ကိုထိန်းညှိစူးစမ်းဖို့သိသာစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လူသားများတွင်စိုက်ထူ၏ neuroregulation အပေါ်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှု၏မျက်နှာသာအတွက်အထောက်အထားအိပ်ပျော်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်း (Cunningham et al, 1990) တွင် nocturnal penile tumescence စမ်းသပ်ကာလအတွင်းတိုင်းတာစိုက်ထူအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏အရေးပါမှုကိုပြသသောလက်တွေ့ဒေတာများကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။ လက်ရှိနားလည်မှုအိပ်ပျော်ခြင်း-related စိုက်ထူလျင်မြန်စွာ-မျက်စိ-လှုပ်ရှားမှုအိပ်ပျော်ခြင်း (Lue, 2002) စဉ်အတွင်း operating supraspinal စည်းမျဉ်းလွှမ်းမိုးမှု၏ activation ပါဝင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ hypogonadism နှင့်အတူယောက်ျားထက် eugonadism နှင့်အတူယောက်ျားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိအိပ်စက်ခြင်း-ဆက်စပ်စိုက်ထူ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီယန္တရား၏အန်ဒရိုဂျင်မော်ဂျူအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ဆွဖို့တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်စိုက်ထူ neurophysiology ၏အခြားသရုပ်, ထိုကဲ့သို့သောသိသာအန်ဒရိုဂျင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်လည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ် hypogonadism နှင့်အတူယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုခွင့်ပြုမှစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်စေခြင်းငှါ, eugonadism နှင့်အတူယောက်ျားလိင်ဖျော်ဖြေဖို့စိုက်ထူရရှိအတွက်အခက်အခဲတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအချက်များတစ်အကွာအဝေးဆက်ဆက်ကဤအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများအောက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအန်ဒရိုဂျင်ထောက်ခံမှု၏ဒီဂရီ၏ကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍကွိုးစားအားထုဖြစ်နိုင်သည်။
al-Shamma HA, အာနိုးက AP ။ ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက် perineal motoneurons အတွက်အန်ဒရိုဂျင် receptor များစကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1997; 94: 1521-1526 [Abstract / အခမဲ့အပြည့်အဝစာသား] ။
baba K ကို Yajima M က, Carrier က S, Akkus အီး, Reman J ကို, Nunes L ကို, Lue TF, ကြွက် Corpus cavernosum နှင့် dorsal အာရုံကြောအတွက် NADPH diaphorase-စွန်းအာရုံကြောအမျှင်များ၏အရေအတွက်အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ Iwamoto တီ Effect ။ Urology ။ 2000; 56: 533-538 [Medline] ။
Breedlove သည် SM, အာနိုးက AP ။ ကြွက်ကျောရိုးတစ်လိင် dimorphic မော်တာနျူကလိယထဲမှာဟော်မုန်းစုဆောင်းခြင်း။ သိပ္ပံ။ 1980; 210: 564-566 [Abstract / အခမဲ့အပြည့်အဝစာသား] ။
Breedlove သည် SM, အာနိုးက AP ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ neuromuscular စနစ်၏ဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်။ II ကို။ အဆိုပါ bulbocavernosus ၏ကြွက်ကျောရိုးနျူကလိယ၏အန်ဒရိုဂျင်-သွေးဆောင်ပုလ်အဘို့အထိခိုက်မခံတဲ့ကာလ။ J ကို neuroscience ။ 1983; 3: 424-432 [Abstract] ။
ဘားနက် AL ။ erectile function ကိုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Neurophysiology ။ ခုနှစ်တွင်: Hellstrom W က, ed ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏လက်စွဲစာအုပ်။ လောရင့်, ကံ: Allen ကစာနယ်ဇင်း Inc မှ, 2000: 12-17 ။
ဘားနက် AL ။ penile စိုက်ထူ၏နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်စည်းမျဉ်း: ဇီဝဗေဒနှင့်ကုထုံးဂယက်ရိုက်။ J ကို Androl ။ 2002; 23: S20-S26 [အခမဲ့အပြည့်အဝစာသား] ။
ကှတျချ B, Hegstrom CD ကို, Villeneuve LS, Breedlove သည် SM ။ အဆိုပါကျောရိုးရှိသတ္တဝါကဦးနှောက်၏လိင်ကွဲပြားခြားနားမှု: အခြေခံမူများနှင့်ယန္တရားများ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 1998; 19: 323-362 [Medline] ။
Cunningham ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Hirshkowitz M က, Korenman စင်ကာပူဒေါ်လာ, Karacan ဗြဲ testosterone အစားထိုးကုထုံးနှင့် hypogonadal ယောက်ျားအတွက်အိပ်စက်ခြင်း-related စိုက်ထူ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1990; 70: 792-797 [Abstract / အခမဲ့အပြည့်အဝစာသား] ။
Dohler KD, Srivastava အက်စ်အက်စ်, Shryne je, Jarzab B, Sipos တစ်ဦးက, Gorski RA ။ ကြွက်ဦးနှောက်၏ preoptic ဧရိယာအတွင်းလိင် dimorphic နျူကလိယ၏ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုအီစထိုဂျင်ရန်နှင့်အတူ postnatal ကုသမှုအားဖြင့် inhibited ဖြစ်ပါတယ်။ Neuroendrocrinology ။ 1984; 38: 297-301 [Medline] ။
မှောင်ခိုဂိုဏ်း Ng, Wong က V ကို, Breedlove သည် SM ။ အန်ဒရိုဂျင်-ထုံထိုကြွက်များတွင် Ciliary neurotrophic အချက်ဖမ်းဆီးမှုများကြွက်သားများနှင့် motoneuron ယိုယွင်း။ J ကို Neurobiol ။ 1995; 28: 354-362 [Medline] ။
Freeman က LM, Watson ဟာ NV, Breedlove သည် SM ။ အန်ဒရိုဂျင်ကြွက်များတွင် bulbocavernosus ၏ကျောရိုးနျူကလိယအတွက် apoptosis ကနေအန်ဒရိုဂျင်-အာရုံမခံစားနိုင်သော motoneurons နှမြောရ။ Horm ပြုမူနေ။ 1996; 30: 424-433 [Medline] ။
Giuliano က F, Rampin အို Schirar တစ်ဦးက, Jardin တစ်ဦးက, ရူးဆိုး JP ။ penile စိုက်ထူ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရထိန်းချုပ်မှု: ကြွက်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းများကမော်ဂျူ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1993; 5: 677-683 [Medline] ။
Gorski RA, Harlan RE, Jacobson CD ကို, Shryne je, Southam လေး။ ကြွက်များ၏ preoptic ဧရိယာထဲမှာလိင် dimorphic နျူကလိယ၏တည်ရှိမှုအဘို့သက်သေသာဓက။ J ကို comp Neurol ။ 1980; 193: 529-539 [Medline] ။
Jacobson CD ကို, အာနိုးက AP, Gorski RA ။ အဆိုပါ preoptic ဧရိယာ၏လိင် dimorphic နျူကလိယ၏ Steroid တစ်မျိုး autoradiography ။ ဦးနှောက် Res ။ 1987; 414: 349-356 [Medline] ။
Kanjhan R ကို, Osborne PB, Ouyang M က, Keast JR ။ ကြွက်တင်ပါးဆုံတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ganglion ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ Postnatal ရင့်ကျက်အပြောင်းအလဲများကို: မှီခို-Steroid တစ်မျိုးနှင့် -independent သက်ရောက်မှုအရောအနှော။ J ကို Neurophysiol ။ 2003; 89: 315-323 [Abstract / အခမဲ့အပြည့်အဝစာသား] ။
Keast JR, Saunders RJ ။ testosterone ဟာဆီးအိမ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တင်ပါးဆုံတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်, အောက်ပိုင်းအူသိမ်အူမနှင့်အထီးကြွက်၏ပြည်တွင်းရေးမျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအပေါ်အစွမ်းထက်, ရွေးချယ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ neuroscience ။ 1998; 85: 543-556 [Medline] ။
Lue TF ။ penile စိုက်ထူနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် priapism ၏ pathophysiology ၏ဇီဝကမ္မဗေဒ။ ခုနှစ်တွင်: Retik AB, Vaughn ED Jr, Wein AJ, eds ။ ကမ့်ဘဲလ်ရဲ့ Urology ။ Philadelphia, Pa: WB Saunders၊ 2002: 1591-1618 ။
Nanasaki Y ကို, Sakuma Y. Perineal musculature နှင့်အထီးယုန်အတွက်ကျောရိုး motoneurons ဖြင့်၎င်း၏ innervation: testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှု။ J ကိုနိပွန် Med SCH ။ 2000; 67: 164-171 [Medline] ။
Raisman, G, ဖျော်ဖြေမှု pm တွင်။ ထိုကြွက်များ၏ preoptic ဧရိယာ၏ neuropil နှင့်မွေးကင်းစကလေးများအန်ဒရိုဂျင်အပေါ်မှီခိုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ။ ဦးနှောက် Res ။ 1973; 54: 1-29 [Medline] ။
Rand MN, Breedlove သည် SM ။ အန်ဒရိုဂျင်ဟာသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ကြွက်သားအပျေါမှာသရုပ်ဆောင်နေဖြင့် SNB motoneurons ၏ dendritic Arbore ပွောငျးလဲ။ J ကို Neurocsi ။ 1995; 15: 4408-4416 [Abstract] ။
Sato Y ကို, Shibuya တစ်ဦးက, Adachi H ကို, Kato R ကို, Horita H ကိုအသက်အထီးကြွက်များတွင်ရေရှည် exogenous testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် dopaminergic neurotransmission ၏ Tsukamoto တီပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ J ကို Urol ။ 1998; 160: 1572-1575 [Medline] ။
Schirar တစ်ဦးက, Bonnefond ကို C, Meusnier ကို C, Devinoy အီးအန်ဒရိုဂျင်ကြွက်များတွင်အဓိကတင်ပါးဆုံတွင်း ganglion ၏အာရုံခံအတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase တမန် ribonucleic အက်ဆစ်စကားရပ် modulate ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1997a; 138: 3093-3102 [Abstract / အခမဲ့အပြည့်အဝစာသား] ။
Schirar တစ်ဦးက, Chang ကို C, ရူးဆိုး JP ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase-နှင့်အဓိကတင်ပါးဆုံတွင်း ganglion innervating ၏ vasoactive အူလမ်းကြောင်း peptide ပါဝင်သောအာရုံခံကြွက်လိင်တံအတွက်အန်ဒရိုဂျင် receptor ၏ Localization ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1997b; 9: 141-150 [Medline] ။